Izizathu eziyi-9 zokuthi kungani iTelegram ingcono kune-WhatsApp | Izindaba zamagajethi
Izizathu eziyi-9 zokuthi kungani iTelegram ingcono kune-WhatsApp
AmaVillamandos | | Software, WhatsApp
Namuhla WhatsApp uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo olusetshenziswa kakhulu emhlabeni, yize ezikhathini zamuva ezinye zezimbangi zalo, phakathi kwazo ngokungangabazeki ezivelele yocingo, bezisondela kancane kancane, ikakhulukazi ngenxa yezici nemisebenzi engekho okwamanje kuhlelo lokusebenza oluphethwe yinethiwekhi yokuxhumana i-Facebook.
Labo bethu abangabasebenzisi beTelegram bavikela lolu hlelo lokusebenza lwemilayezo esheshayo izinyo nesipikili, ikakhulukazi ngoba kuqinisekisa ukuphepha kwethu nokwedatha yethu yomuntu siqu, futhi ngoba futhi kusinikeza imisebenzi ethokozisayo nezinketho zokuthola okuningi ekusebenziseni kwalolu hlobo . Namuhla, noma ngabe ungumsebenzisi weTelegram noma uma ungakabikho, sizokukhombisa Izizathu ze-9 kungani ngombono wethu othobekile sikholelwa ukuthi iTelegram ingcono kune-WhatsApp.
Ngokulandelayo uzofunda njengoba sesivele sikutshele izizathu eziyi-9 zokuthi kungani sikholelwa ukuthi iTelegram ingcono kuneWhatsApp, yize cishe singakupha okunye. Vele, akekho ongabazayo ukuthi singakunika nesizathu sokuthi kungani uhlelo lokusebenza lwemiyalezo olusheshayo lwe-Facebook lungcono kunokusetshenziswa kwemvelaphi yaseRussia, kepha okungenani okwamanje, sizoyishiya ibe ngenye indatshana, ungangabazi ukuthi ngokuphepha okuphelele sizokushicilela kuyo le webhusayithi.
1 Yocingo, insiza ngokuphelele free
2 Izingxoxo eziyimfihlo, iphuzu eliqinile
3 Vimba abasebenzisi
4 Ngithumela amavidiyo anoma iluphi usayizi nobude besikhathi
5 Ukuzilimaza kwemilayezo noma ubumfihlo kuthathwe ngokweqile
6 Izitika noma ukuzijabulisa okungenamkhawulo
7 Yiya ngokunganakwa kunoma yiliphi iqembu
8 Uhlobo lweTelegram ye-PC
9 Ukususa i-akhawunti nedatha kusuka kuTelegram kungenzeka
10 Umbono ngokukhululeka
Yocingo, insiza ngokuphelele free
Ngokungafani ne-WhatsApp, iTelegram iyisevisi yamahhala ngokuphelele Futhi yize uhlelo lokusebenza lwemiyalezo olusheshayo lwe-Facebook lunentengo ephansi kakhulu, okuzofanele siyikhokhe minyaka yonke, kuzosibiza imali okungenzeka asifuni ukuyikhokha.
Ngenhlanhla, ukusetshenziswa komsuka waseRussia okwenziwe ngabazalwane bakaDurov kungalandwa mahhala ngokuphelele, ngaphandle kokukhokha ngisho nesenti elilodwa ukulilanda noma ukuvuselela insiza.
Izingxoxo eziyimfihlo, iphuzu eliqinile
Ubumfihlo bezinhlelo zokusebenza zemiyalezo esheshayo bungaphezu kwenele kubasebenzisi abaningi, kepha kukhona abanye abafuna ukudlulela phambili futhi abafuni ukuthi izingxoxo zabo zivezwe emehlweni alawo muntu. Kungakho iTelegram isinikeza ithuba lokudala izingxoxo eziyimfihlo lapho imilayezo phakathi kwabasebenzisi izobethelwa khona, ngaphandle kokukwazi ukuthunyelwa futhi futhi kungashiyi mkhondo kumaseva enkampani.
Ukuqala ingxoxo eyimfihlo, vele uvule imenyu yohlelo lokusebenza bese ukhetha inketho "Ingxoxo entsha eyimfihlo". Kusukela kulo mzuzu kuqhubeke ungakhuluma ngokuphepha futhi ngaphandle kokwesaba. Vele, awufuni ukuhlakanipha futhi weqe imithetho ebesikhulume ngayo, futhi ungathathi isithombe-skrini ngoba uma usenza, omunye umsebenzisi okhuluma naye uzokwaziswa ukuthi bathwebula ingxoxo.
Ithuba lokuvimba abasebenzisi likhona ezinhlelweni zokusebenza eziningi zemiyalezo esheshayo, noma singakusho lokho kuTelegram ikhona ngendlela elula. Kwanele ukuvimba umsebenzisi othile ukuze ngaphakathi kwemenyu eseceleni, sikwazi ukufinyelela kumenyu yezilungiselelo bese kuba imenyu yobumfihlo nokuvikeleka.
Kule menyu singabona uhlu lwabasebenzisi abavinjiwe futhi ngokucindezela isithonjana esiwuphawu lokuhlanganisa (+) singangeza abasebenzisi abasha kulolu hlu.
Ngithumela amavidiyo anoma iluphi usayizi nobude besikhathi
Esinye sezizathu esingangabazeki sokuthi kungani sibheka ukuthi iTelegram ingcono kuneWhatsApp, yi- kungenzeka ukuthumela amavidiyo anoma yisiphi isayizi nobude besikhathi, okuthile okungenakwenziwa kwezinye izinhlelo zalolu hlobo.
Amavidiyo esiwaqopha namuhla ngomakhalekhukhwini wethu athatha isikhala esengeziwe futhi uma kukhulunywa ngokuwathumela I-WhatsApp ibeka umkhawulo we-16 MB, futhi kunenkinga yokuthi ikhwalithi nencazelo yehla kakhulu. NgeTelegram le nkinga iyanyamalala futhi singathumela noma iyiphi ividiyo, noma ingakanani ubukhulu bayo. Futhi, uma ufuna ukuthumela okuthile ngaphandle kwamafayela, noma ngabe kusinda kangakanani, ngeke ube nenkinga nakho.
Ukuzilimaza kwemilayezo noma ubumfihlo kuthathwe ngokweqile
Uma kwenzeka ithuba lokuqhuba izingxoxo eziyimfihlo nabanye abasebenzisi libonakala lingaphephile ngokwanele, iTelegram ikunikeza ne- kungenzeka ukunika amandla inketho yokucekela phansi imilayezo ngaphakathi kwenye yalezi zingxoxo eziyimfihlo. Inhloso yalo msebenzi ukuthi awukho nhlobo umkhondo wengxoxo yethu nomunye umsebenzisi, futhi ukuthi siyakhumbula ukuthi kumaseva wohlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo akukho mkhondo noma ikhophi yemiyalezo ethunyelwe noma eyamukelwe.
Ukwenza imilayezo izilimaze, kufanele ungene kwimenyu yengxoxo bese ukhetha inketho yokuqala ebizwa "Sungula ukuzilimaza". Ngaphezu kwalokho, futhi ukuze yonke into ibe ngaphansi kolawulo lwakho, uzokwazi ukukhetha isikhathi okufanele sidlule ukuze imilayezo isuswe ngokuzenzakalela.
Izitika noma ukuzijabulisa okungenamkhawulo
I-WhatsApp isinikeza ithuba lokuthumela abanye abasebenzisi abaziwa njengezithonjana, nazo ezitholakalayo kuTelegram. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa komsuka waseRussia kusinikeza nethuba lokuthumela nokujabulela labo ababhapathizwa njengezitika.
Uma kwenzeka ungakaze ubone Izitika zeTelegram zingachazwa njengezithonjana ezisetshenzwe kakhulu futhi zafezeka, engalandwa mahhala futhi etholakala ezinkulungwaneni zenethiwekhi yamanethiwekhi. Kusukela kumanxusa, ngokusebenzisa abalingiswa be-Star Wars futhi sifinyelele inani elikhulu losopolitiki, singajabulela amakhulukhulu ezitika zokuzijabulisa.
Ngaphezu kwalokho, uma izitikha ezitholakalayo zingakukholisisi ngokweqile, ungahlala uzenzela izitika zakho zokuzisebenzisa ngamaqembu owabelana nabangani bakho noma nomndeni wakho.
Yiya ngokunganakwa kunoma yiliphi iqembu
Amaqembu ezicelo zemiyalezo esheshayo asefashini futhi akumangazi neze ukuthi sicwiliswe emaqenjini ayishumi nambili, lapho singathanda ukungabonwa nokuthi ngokwesibonelo ku-WhatsApp asikwazi, ngoba sesivele siveza okwethu inombolo yocingo. Lokhu kuyefana nokwenza kube lula kubasebenzisi abaningi ukuthola inombolo yethu yocingo eyigugu esingakaze siyinike noma ngubani.
KuTelegram ukwengeza noma imuphi umsebenzisi ngeke sazi inombolo yakhe yocingo futhi kuzokwanela ukuthi usinikeze igama lakho lomsebenzisi. Ngaphezu kwalokho, ngamaqembu singahamba singanakwa nhlobo ngoba inombolo yethu yocingo ngeke iboniswe nganoma yisiphi isikhathi, kugcina ubumfihlo bethu futhi ngaphezu kwakho konke kusigcina kude nezinhlebo namamoskoni kulawo maqembu ezinhlobo zeminyaka edlule afuna ukwengeza ukwazi ukuthi ngabe uphumelele empilweni njengabo.
Uhlobo lweTelegram ye-PC
Uma inguqulo yeTelegram yamadivayisi eselula ngokungangabazeki ingenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuthumela imiyalezo ezikhona njengamanje, inguqulo ye-PC ayikude kakhulu futhi isinikeza cishe yonke imisebenzi nezinketho esinazo kwi-smartphone yethu.
Ngokunwetshwa kweTelegram ye-Chrome noma ngenguqulo yewebhu singaba nezingxoxo noxhumana nabo futhi sisebenzise izinzuzo, isibonelo, ikhompyutha yethu esisinikeza zona.
Ukususa i-akhawunti nedatha kusuka kuTelegram kungenzeka
Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo ngokushesha I-Telegram isivumela ukuthi sisuse ngokuphelele futhi ngokuphelele i-akhawunti yethu, ngaphandle kokushiya umkhondo wedatha yethu, izingxoxo noma izithombe ezithunyelwe noma ezamukelwe.
Abekho abasebenzisi abaningi abafuna ukususa i-akhawunti yabo kulolu hlobo lwesicelo, kepha uma kungenzeka, kuyizindaba ezinhle ngokungangabazeki ukuthi kuTelegram kuyindlela esheshayo nelula.
Namuhla emakethe kunenombolo enkulu yohlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo olutholakalayo, ngamaphoyinti abo amahle futhi amabi. Iningi labasebenzisi lisebenzisa i-WhatsApp, kepha abasebenzisi abaningi ngokwengeziwe bathambekele ekusebenziseni iTelegram noma ngisho, njengoba kunjalo kimi, bobabili, ngoba okwamanje akusiwo wonke umuntu ofake isicelo ku-smartphone yakhe. Futhi ukubona ukuthi ngubani oqinisekisa umama ukuthi iTelegram ingcono kuneWhatsApp, ngomsebenzi owamkhokhela ukubusa uhlelo lokusebenza lwemiyalezo olusetshenziswa kakhulu emhlabeni.
Uma ungakaze uzame iTelegram izincomo zethu azinakuba ngenye indlela kunokuzama khona manje, futhi ngukuthi yize iphephe futhi isinikeza ubumfihlo obukhulu, kunamaphuzu abaluleke kakhulu ozowathanda futhi uwaqinisekise.
Ngabe ucabanga njengathi ukuthi iTelegram ingcono kuneWhatsApp?. Ungasinika umbono wakho ngalokhu esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma ngokusebenzisa enye yezingosi zokuxhumana nabantu esikhona. Singathanda futhi ukuzwa kuwe ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo noma izinhlelo zokusebenza ozisebenzisayo njengamanje.
Umthuthukisi: I-Telegraph FZ-LLC
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Izizathu eziyi-9 zokuthi kungani iTelegram ingcono kune-WhatsApp
Yocingo ingcono kunewhatsapp? Uyisidemokhrasi. Abasebenzisi abayizigidi ezingama-1000 ngokulwa nama-40, ngamafuphi ...
Bakukhokhela malini? Uyazi ukuthi ukukhangisa, noma kufomethi yolwazi, kuphoqelekile ukwazisa?
Hahaha ,, Ukhisimusi omuhle
Kusukela nini izinhlelo zenani labasebenzisi bazo? ...
Impela, futhi iFiat Uno ingcono kune-Audi R8 ngoba nabantu abaningi bayayisebenzisa
Manje ngithola ukuthi iqiniso lokuthi i-WhatsApp inabasebenzisi abayizigidi eziyizinkulungwane ezi-1000 ikwenza kube ngcono kuneTelegram, "okuyi" kuphela enezigidi ezingama-40. Ukuthi uhlelo olulodwa lungcono noma lubi kunolunye luzolinganiswa ngenye indlela.
Ngendlela, yisebenzise bese uyakhuluma
ULuis Arturo kusho
I-Telegram ingcono kakhulu
Phendula u-Luis arturo
U-Alvaro C. kusho
Kubukeka kungukusetshenziswa okuhle kuze kufike ezingeni lokuthi engixhumana nabo abangama-350 kuphela ongu-1 onalesi sicelo. Sldes.
Phendula u-Alvaro C.
U-Sebastian Rolong kusho
I-Telegram ingcono kune-whatsapp Ngingathanda ukuthi sonke sisebenzise i-telegram esingathumela amanye amafayela.
I-Telegram inemisebenzi ecishe ifane nohlelo lokusebenza oludala lwe-ICQ lokuthumela imiyalezo, olufana nocingo, oluphephile
Phendula uSebastian rolong
EJ AU kusho
Futhi, manje kunamakhasi afana ne-fotowhatsapp.net lapho ungabona khona isithombe sephrofayili nesimo ngokufaka inombolo yomuntu
Phendula ku-EJ AU
Lapho wenza lolu hlobo lokuthunyelwe, kufanele ugweme ukusebenzisa amagama anjengokuthi "umhlaba."
Ngoba kumuntu wase-Asia utshela iWhatsApp, bese bephendula ukuthi Yini, yini leyo?
Kukhona okubusa imiyalezo ye-WHAT.
I-Russia kanye namazwe angomakhelwane, ngqo iTelegram.
IMexico kanye neLatin America ekhulayo neWechat.
Futhi uma iTelegram ingcono kuneWhatsApp. Kwaziwa kancane kancane.
Lokhu kungaba isilawuli seNintendo NX